Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny cooler evaporative | Fanavaozana maintso
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny cooler evaporative
Portillo Alemanina | | Mitsitsy angovo
Raha resaka aircon ny efi-trano na trano dia toy izany koa no atao amin'ny fanafanana. Mila mitady fomba hampangatsiahana amin'ny vidiny faran'izay kely indrindra sy ny fahombiazana faran'izay betsaka isika. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy misafidy izay fitaovana hampiasana arakaraka ny mampiavaka azy isika, ny fanjifana azy, mila takonana sy ny vidiny. Androany isika dia hiresaka momba ny fomba hafa amin'ny fividianana rivotra lafo vidy. Momba ny a rivotra etona etona.
Te hahafantatra ve ianao hoe inona ity fitaovana fanamafisam-peo ity ary inona no tokony ho fantatrao alohan'ny hividianana iray? Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia manazava amin'ny antsipiriany anao ny zava-drehetra 🙂
1 Famaritana ny cooler evaporative
3 Karazana atmosfera takiana
4 Toerana sy fahefana
Famaritana ny cooler evaporative
Izy io dia fitaovana hybrid eo anelanelan'ny fan sy ny aircon. Ny mpankafy dia be mpampiasa tato anatin'ny folo taona lasa ary mbola ampiasaina matetika tokoa. Tsotra ny fomba fiasan'izy io: amin'ny alàlan'ny lelany mihetsiketsika amin'ny motera, izy ireo dia mamindra ny rivotra manodidina hanolotra onjam-peo izay manampy mangatsiatsiaka.
Etsy ankilany, miasa amin'ny fomba mahomby kokoa ny aircondition, fa lafo kokoa. Ary ny rivotra madio izay omen'ny fifehezana rivotra antsika amin'ny fahavaratra dia tena mampahazo aina sy mahafinaritra. Fahita matetika ny miditra ao amin'ny magazay ary mahatsikaritra ny tsy fitovian'ny rivotra amin'ny arabe sy ny atitany. Betsaka ny olona no mandany fotoana bebe kokoa amin'ny magazay mba hialana sasatra rehefa miantsena.
Amin'ity tranga ity dia manandrana mahazo isika hybrid eo amin'ireo fitaovana roa ireo. Raha ny tokony ho izy dia tokony afangaro ireo zavatra tsara roa amin'ny tsirairay, tsy ampitomboina ny vidiny. Izy io dia rafitra fanamafisam-peo somary tsotra ary tsy mila fametrahana lehibe. Azo apetraka na aiza na aiza ao an-trano, na dia mila fitakiana ilaina aza izany: manana outlet elektrika. Misy lafin-javatra maro izay nanjary safidy tena tsara ireo aircon ireo manoloana ny fahavaratra sy ny hafanana avo.
Amin'ny lafiny iray, hitantsika fa tsy dia lehibe loatra ny habaka ilaina. Raha ilaina mitazona metatra vitsivitsy ao amin'ny efitrano aiza no hametrahantsika azy. Amin'izany no hananantsika fampisehoana tsara kokoa. Tsy mila fantsom-pizarana rivotra ianao ary samy hafa ny lanjany. Ny filamatra dia ny misafidy iray izay tsy mavesatra loatra ny lanjany hahafahana mitondra azy avy ao amin'ny efitrano raha ilaina izany. Noho izany dia hananantsika izany amin'ny fotoana rehetra ilainay.
Teboka iray manohana ary tokony hikajiana rehefa mividy aircon évaporative dia ny hery. Tsaroantsika fa noho ny herinaratra ny fanjifana avo kokoa na ambany dia azo avy amin'ny fitaovana. Io, farany, misy fiatraikany amin'ny vidin'ny faktiora amin'ny faran'ny volana. Tsy maintsy jerentsika ny haben'ny efitrano rehefa mifidy ny hery. Raha toa ka kely ny filan'ny aircon, miaraka amin'ny herinaratra 150W eo ho eo dia mihoatra ny ampy.
Mba hahafantarana sy hanananao toky ny kalitaon'ny fitaovana dia nanolorana anao tsy hividy marika "fotsy". Amin'ity tranga ity dia tariho ireo marika manana kalitao izay manana rakitsoratra tsara ao amin'ity sehatra ity ary nanampy tamin'ny famoahana rivotra ny vondron'olona tsara. Mividy an'ity vokatra ity tsy mila heverina ho fandaniam-bola, saingy fampanjariam-bola bebe kokoa raha ny amin'ny famolavolana rivotra ny tranonao amin'ny vidiny lafo.
Mikasika ny fanjifana azy, na dia tsy zavatra mandany kely toy ny mpankafy aza izy io, dia kely kokoa noho ny amin'ny rivotra izy no mandany. Azo lazaina fa eo anelanelan'ny fitaovana roa no fanjifany. Araka ny filazan'ny manam-pahaizana, ny cooler etona dia mandany herinaratra dimy heny mihoatra ny etona. Tena mahatonga azy io ho mpifaninana HVAC tena mifaninana.
Karazana atmosfera takiana
Tena tsara torohevitra ho an'ireo trano ireo izy ireo maina sy mafana ny atmosfera. Tsy tokony hampiasaina amin'ny toerana misy hamandoana avo izy io, satria afaka miforona ny fanondranana. Na dia maina aza ny rivotra ao an-trano, mandritra ny fampiasana azy, dia tsara ny mametaka ny efi-trano miaraka amin'ny fahita matetika. Amin'izany fomba izany no hialantsika amin'ny fampihenan'ny rivotra noho ny hamandoana be loatra. Ho fanampin'izay, ny rivotra no mahatonga ny fitaovana hampangatsiaka indray.
Rehefa miditra amin'ny rivotra isika ary mampiasa ilay etona etona etona etona dia avelantsika hivoaka ny efitrano ny rivotra mafana sy maty. Mandritra izany fotoana izany dia manakana ny vovoka tsy hiditra avy any ivelany isika.
Ny fahombiazany dia miankina amin'ny "toetrandro" misy isaky ny toerana fametrahana. Rehefa maina ny rivotra Izy io dia afaka mampihena ny mari-pana eo anelanelan'ny 10 sy 12 degre. Ity dia heverina ho haavon'ny fihenan-tsakafo. Etsy ankilany, raha ataontsika amin'ny rivotra feno setroka izany dia tsy afaka mampihena ny maripana eo anelanelan'ny 5 sy 7 degre fotsiny isika. Araka ny hitanao dia mihena be ny fahombiazany.
Amin'io lafiny io, ny maina kokoa ny tontolo iainana, ny lehibe kokoa ny fampangatsiahana ary, noho izany, ny lehibe kokoa ny fanjifana rano koa.
Toerana sy fahefana
Ny fepetra tokony horaisina rehefa misafidy cooler evaporative dia ny fahafantarana ny fangatahanao. Raha mila ny fitaovana ianao hampangatsiaka any ivelany na any an-trano. Miovaova be ny maodely sy ny hery ilaina. Zava-dehibe koa ny fahalalana ireo metatra toradroa izay mila hafanaina.
Raha ny efitrano izay hihaonantsika dia manana habe eo amin'ny 10-15 metatra toradroa, miaraka amin'ny etona 100W izay mihoatra ny ampy. Na izany aza, raha 20 metatra toradroa ny efitrano (toy ny efitrano fandraisam-bahiny mahazatra), iray amin'ny herinaratra 150W no ilaina.
Etsy ankilany, raha mikarakara ireo fantsom-panafahana rivotra isika, dia mila fitaovana manana hery bebe kokoa sy plug hampifandray azy ianao. Ny maodely sasany dia mitondra mampifandray fantsona sy manavao ny rano. Misy maivana kokoa ho an'ny efitrano kely kokoa miaraka amin'ny hery 60W. Mety hihaona amin'ny sasany aza isika Conditioner amin'ny rivotra USB hananana azy ireo ao amin'ny biraonao.
Ilaina ny fanatanterahana fikolokoloana sy famerenana tsindraindray mba hiantohana ny fampiasana tsara ny aircon. Zava-dehibe ny hitandremana azy io ho madio sy tsy ho simika, satria manintona bakteria sy holatra ny hamandoana. Isan-taona dia tokony diovina tsara ny fitoeran-drano mba hitazomana ny kalitao. Ankoatr'izay dia asaina mandinika ny fitaovana aorian'ny vanim-potoanan'ny fampiasana ka raha tehirizina dia tazomy amin'ny toerana tsara ary tsy miharatsy izany.
Amin'ity fampahalalana ity dia azonao atao ny mitazona ny tranonao mangatsiatsiaka amin'ny vidiny ambany noho ny rivotra sy ny fahombiazany kokoa noho ny mpankafy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny cooler evaporative
Prime dia hoy izy:
Mahaliana ny mahafantatra fa mihatsara ny olana ary tsy hanana ireo fitaovana izay hafanainao vao manomboka afo ireo .. Io dia tena tsara ho an'ireo birao miasa tsara
Mamaly an'i Prime
Inona ny hamandoana haavo ambony indrindra apetraka amin'ny asanao?
Tompon'ny angovo azo havaozina
Inona avy ireo mpanangona hafanana ary ahoana ny fiasan'izy ireo?